ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက် - Ningbo Focusway Machinery Co. , Ltd မှ
Ningbo Focusway Machinery Co. , Ltd မှအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ ချ. တဲ့ professional လူမီနီယံသေဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသိုလှောင်မှုနဲ့တင်ပို့ဖို့, tools တွေနဲ့, OEM ဝန်ဆောင်မှု One-ရပ်တန့်သတ္တုများပုံသွန်း, စက်, မျက်နှာပြင်ကုသမှုသေဆုံးသည်။ ဒါဟာအစဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီအခြားဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
Focusway အရေးကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းကိုတဦးနှင့်တရုတ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအခြေစိုက်စခန်း ချ. ဖြစ်သော Beilun Ningbo မှာတည်နေရာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 2013 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, 13000 ㎡andယခုအကြောင်းကို 120 န်ထမ်းရှိပါတယ်ယူထားသော။
ယင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကတည်းက Focusway ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်ထုတ်စွမ်းရည်, တိကျခိုင်မာစွာအလုပ်လုပ်သဘောထားနှင့်ကျေနပ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ကအကောင့်ပေါ်တွင်တစ်နှစ်လျှင်ခြင်းဖြင့်လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်နှစ်စောင့်ရှောက်။ အခုတော့ဖောက်သည်လူသိများတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပါအဝင်ဥရောပနှင့်အမေရိကတိုက်ကနေအဓိကအားဖြစ်ကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒါဟာကောင်းသောဂုဏ်သတင်းတက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်စသည်တို့ကိုစက်မှု, အော်တို & မော်တော်ဆိုင်ကယ်, Lighting, အီလက်ထရောနစ်, ပြည်သူ့်ဆောင်မှုများအပါအဝင်အမှုဆောင်နေသည်။
Focusway လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, ကြိုဆိုဖောက်သည်ဖြစ်ရည်ရွယ်နှင့်ပိုပြီးအခွက်ကျွန်တော်တို့ကို join ကြိုဆိုပါ၏!